Amaqela kusetyenziswa ngokukodwa abavelisi kunye nabaxhasi | I-China yahlelwa ngamaqela okusetyenziswa okukhethekileyo
Iiseti zeJenereta yaselwandle ye-DEUTZ
Intshayelelo 1.Production: Walter - Deutz manqaku zaselwandle, injini ikhethwe Weifang Weichai Deutz Diesel Injini Co., Ltd. Weichai Deutz yimveliso ehlanganyelweyo phakathi German Deutz kunye China Weichai Group, ikakhulu uvelisa WP4 WP6 uthotho iinjini brand Deutz, IJamani iDeutz ngumenzi weenjini zedizili ezikumgangatho wehlabathi, owasekwa ngo-1864, nowadalwa ngumsunguli we-injini ezine zerhasi, uMnu Otto noLangen. Ngokuqhubeka kokuphuculwa kunye nokuqinisekiswa kweminyaka eyi-130, i-DEUTZ ha ...
Iiseti zeJenereta yaselwandle yeYUCHAI
Iiseti zeJenereyitha zaselwandle zeZICHAI
1.Product intshayelelo: Walter-Zibo series iseti khetha i-injini enkulu idizili amandla ukusuka ZIBO generator idizili company.It inemisebenzi emininzi: ukusebenza elula, amafutha eliphantsi, amandla amakhulu, njl Ubuninzi iimveliso 50HZ kunye 60HZ. 2.Iiparameters ze-zichai: Inombolo yeModeli yeOotput Power Injini / iPiston Stroke (mm) yokufuduswa (L) Ukusetyenziswa kwePetroli (g / kw.h) Imodeli yeGenerator yobukhulu bayo ngokubanzi L * W * H (mm) Ubunzima (kg) KW KVA CCFJ-200 200 250 Z6170ZLD-2/275 170/200 16 ≤198 M ...
iseti yomvelisi wetreyila
Uhlobo lweselfowuni erhuqwayo idizili generator1. Yenzelwe ngokukodwa iimfuno zamandla eselfowuni eqhelekileyo okanye ebaleni. 2. Iqokobhe lenziwe ngeplate ekumgangatho ophezulu okanye ipleyiti yokugoba, eneempawu zokumelana nokubola, kunye nokutywinwa okuhle, njl. Iifestile neengcango zecala ezine zixhotyiswe ngenkxaso ye-hydraulic, ekulula ukuyivula. 4. Amavili e-chassis anokuyilwa kubini, ezine, iivili ezintandathu ngokweemfuno zabathengi. Uyilo lwencwadi olwenziwayo, oluzenzekelayo, i-hydraulic bra ...
Uhlobo lwesikhongozeli sohlobo lweWalter 1. Sebenzisa isikhongozeli esingu-20'ft se-genset ukuya kuthi ga kwi-1250kVA kunye ne-40'ft yesikhongozeli se-genset ukusuka kwi-1250kVA. 2. I-genset epheleleyo yeekhonteyina ingathunyelwa ngqo kuthutho lwaselwandle olugcina iindleko zothutho. 3. Umqhaphu ofunxa isandi kunye nembasa yentsimbi egqunyiweyo zibekiwe kumazantsi e-canopy, kunye nesitshizi sokucima umlilo. 4. Isilencer yemizi-mveliso yangaphandle, umphumo wecompact kunye nesilencer. 5. Iikhabhathi ezicwangcisiweyo zonikezelo, igumbi lokulawula, iisistim zokukhanyisa, ...
Cwaka i-Diesel Generator
UWalter cwaka wenkunkuma 1.Yamkela 20'ft isikhongozeli genset ukuya ku 1250kVA kunye 40'ft isikhongozeli genset ukusuka 1250kVA. 2. I-genset epheleleyo yeekhonteyina ingathunyelwa ngqo kuthutho lwaselwandle olugcina iindleko zothutho. 3. Umqhaphu ofunxa isandi kunye nembasa yentsimbi egqunyiweyo zibekiwe kumazantsi e-canopy, kunye nesitshizi sokucima umlilo. 4. Isilencer yemizi-mveliso yangaphandle, umphumo wecompact kunye nesilencer. 5. Iikhabhathi ezicwangcisiweyo zonikezelo, igumbi lokulawula, iisistim zokukhanyisa, ...
IicUMMINS Iiseti zeJenereyitha yaselwandle
Intshayelelo 1.Production: Walter -cummins zaselwandle series, Injini ikhethwe Cummins B, C, L series idizili injini Dongfeng Cummins generator co., Ltd kunye Cummins M, N, K uthotho Chongqing Cummins generator co., Ltd., ngobume obufanelekileyo, ukusebenza ngokugqwesileyo, ukugcinwa ngokulula kunye nezinye izinto ezibonakalayo. 2.Iiparamitha zeCUMMINS Cwaka Generator Sets: Imodeli yeNombolo yeOotput yamandla eNjini / iSilinda yamanani ePiston Stroke (mm) Ukufuduswa (L) Ukusetyenziswa kweFutha (g / kw.h) O ...